गजल- अझै पलाएन
Story - A monkey
किरणलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था पहिले पनि नपरेको होइन । केही बर्ष पहिलाको कुरा हो उसको एकजना नातेदार प्रहरीका ठूलो हाकिम थियो । ऊ जिल्ला भ्रमणमा जाँदा किरण पनि साथै गएको थियो । जिल्ला तहका हाकिम डिएसपीले आफ्ना हाकिमलाई जस्तै उसलाई ड्याम्म यसरी सेलुट गरे पछि ऊ झसंग भएको थियो । पसिना-पसिनाजस्तो भएको थियो किरण ! अब के भनेर परिचय गर्ने । तर चलाक किरणका आफन्तले कुरा मोडिदिए परिचय गर्नै परेन .
हाम्रो समाज का टुप्पाबाट पलाउने हरु लाई बडो ब्याङ्यात्मक ढंग ले प्रहार गरेको छ यो कथाले । शहरी क्षेत्र का नब धनाड्य मैधनी हरुको बाहिरी आबरण लाई काउकुती लगाइ लगाइ उनिहरुको भित्री आबरण देखाउन सफल छ यो कथा ।
धेरै नै राम्रो कथा ॥ वास्तविकतालाई निकै नै मजालो ओकल्न सफल कथा ॥
लौ , यहा का हाम्रा कमेन्ट काहा गयचन् , के हो दौतरी साप , अब माई संसार जस्तो हाकिम हुन खोजेको हो क्या हो ?
हे प्रभु यो एनीलाइ पनि के भाको? लेख्ने एक ठाउंमा, खोज्ने अर्को ठाउंमा। बिबाद माथी बिबाद गर्न तिर लागिन है म त।